Archive du 20-oct-2020
Laoka matsiro, mahasalama
latsaky ny 3000Ar
Maro be ireo renim-pianakaviana sahirana aminny fikarohana izay hatao nahandro isanandro. Mila ampitoviana tantana aminny ho enti-manana koa mantsy ny sakafo tiana ho handrahoina. Aminity herinandro ity, andao hihinana sakafo matsiro, mahasalama ary tsy mihoatra ny 3 000Ar
Inona ny menaka tarehy mety aminao?
Miantoka ny fahasalamanny hodi-tava sady mitazona ny hatsaranny tarehy tsy ho antitra aloha loatra ny fanadiovana azy isanandro sy ny fanosorana menaka manamandina.
Mampirafy be ny vadiko ka lasa tena halako izy.
Izy rahateo koa tezitra rehefa kitihako ary izaho tsy mahazo fahafinaretana mihitsy rehefa miray aminy. Mila mieritreritra olona hafa aho rehefa miaraka aminy. Inona no torohevitra azonareo omena ahy ?
Voka-tsoa majika 16 entinny sakamalaho
Ireo voka-tsoa entiny · Mampitony ny maloiloy sy ny mandoa · Mampitony fanaintainana ao aminny vavony · Misoroka ny aretinny fo sy lalan-drà · Misoroka ny homamiadana sasany · Mampihisatra ny fahanteranny sela · Misoroka ny infection sady mamono otrikaretina (antiseptique) · Misoroka ny fidorehitry ny ao anaty (anti-inflammatoire) · Manaitra ny filana (aphrodisiaque) · Miaro sy mahatonga ny taova ao anaty hiasa tsara · Mampitony ny fanaintainanny hozatra · Mamerinaina, manamafy ny hery
Vaksiny miaro aminny Coronarivus : Hivoaka aminny 2021
Aretina vaovao ny Coronavirus. Karohina fatratra aminizao fotoana ny vaksiny fanefitra hiarovana aminio valanaretina io izay tsiahivina fa namono olona an-tapitrisany maneran-tany. Ny hita sy tsapa anefa dia tsy matoky loatra ny vaksiny ny eto Madagasikara.
Te ho bebe andilana
araho ireto !
Tsy vitsy ny vehivavy mba te-hanana fitombenana mivelatra kokoa .Ireto fampihetseham-batana ireto no hanampy anao hanatratra izany tanjona izany.
Mikarakara votabia ho anny zazakely
Manomboka eo aminny faha enim-bolanny zaza no tsara omena fanam-pitsakafo izy.
Matthew Mc Conaughey : nitantara ny fomba hafakely nahafaty ny rainy
Misy ny fahafatesana azo lazaina hoe tsara. Misy kosa ireo olona no maty ao anaty fijaliana tanteraka nefa misy olona maty aminny fotoana tena mety.
Ny atao, raha manavy ny zaza
Tranga ilaina fahamalinana ary tsy tokony hampipetrapetraka ny ray aman-dreny ny zaza mafana hoditra. Na vao teraka izy, fa firy volana, aleo foana manatona dokotera.
Shopping « Arts malagasy »
1. Serviette main personnalisé 30*50cm, broderie a la main. Motifs fait à la main et avec amour par nos artisanes. Page: Alexia Kreation Contact: 0346252081 Prix: 75 000ar
Mahay misoroka hemorroïde
Karazana lalan-drà mibontsina, mpahazo ny lalanny maloto no mahatonga ny hemorroide.
Bakalorea : Nisy mpiadina diso lalana, tonga teny aminny LMA
Mpiadina hiatrika ny fanadinana Bakalôrea teknika vitsivitsy diso toerana no tonga tao aminny foibem-panadinana LMA Ampefiloha omaly maraina.
« Festival des Jardins » : hanomboka aminny 29 oktobra ny andiany faharoa
Hetsika iray hifamotoananireo mpankafy sy mpitia ny tontolonny zaridaina ny « Festival des jardins » karakarainny Alliance Francaise etsy Andavamamba.
BORIBORINTANY FAHAEFATRA Tsy mandika kopia aminny teny Frantsay intsony
Tsy mandika kopia aminny teny Frantsay intsony ny Boriborintany faha-efatra, raha araka ny fanadihadiana natao tao an-toerana.
Ady aminny kere any Atsimo Efa voafaritra ireo toerana 03 hasiana ilay toby fitsaboana sy fanarenana ara-tsakafo
Mitohy hatrany ny fidinana ifotony fitadiavana vahaolana maharitra manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo any aminny faritra Atsimonny Nosy. Minisitra miisa 6 dia ny Minisitry ny Mponina,
Roa vavikely voaolana teny Ivato : Manazava ny fianakavianilay sécurité
Manoloana ny vaovao mahakasika ireo roa vavikely 5 taona avy, izay voalaza fa naolanny tovolahy iray, 20 taona "agent de sécurité" teny Ivato dia nitondra fanazavana ny fianakaviana akaiky anilay mpiambina voarohirohy ka efa naiditra am-ponja.